Chii chinonzi Mobile Kushambadzira?
Chishanu, April 13, 2018 Mugovera, Kukadzi 13, 2021 Douglas Karr
eMarketer inoratidza kuti nharembozha -vashandisi veinternet chete ichawedzera kubva pamamirioni 32.1 kusvika makumi mashanu nemakumi mashanu emamiriyoni pakati pagore ra52.3 na2015 Mugore rapfuura chete, nharembozha -kushandisa internet yakawedzera kubva pamamiriyoni makumi matanhatu nematanhatu evashandisi kuenda kuvashandisi mamirioni makumi mana neshanu. iyo yakamira desktop mushandisi; semhedzisiro, ine zviyero nevashandisi venhare-chete. Chimwe chinhu chakakosha, hongu, ndiko kwavo kufamba kwenzvimbo. Ndipo panopinda nhanho yekushambadzira (MMA).
Muvhuro, September 14, 2015 Muvhuro, October 12, 2015 Douglas Karr
Sezvo kutarisa kwevhidhiyo kuri kuramba kuchikwira, pane mukana wekusvika kune chaicho vateereri vachishandisa dzakasiyana nzira dzekutarisa. NaYashi, mabhizinesi anogona kumisikidza chaiko nzvimbo uye kureba uye nekushongedza nharaunda yakatenderedza, achishambadzira kushambadza chete kune vanhu vanogara munzvimbo iyoyo. Kugona kwekutarisa kwaYashi kunoita kuti zvive nyore kuratidza kushambadza kwako kuvanhu vakatoshanyira saiti yako. Yashi anoongorora anopfuura makumi matanhatu nemashanu emamiriyoni emamiriyoni pamwedzi uye